Kuwana Balance Muhupenyu: 9 Hapana Nonsense Matipi! - Blog
Kuwana Balance Muhupenyu: 9 Hapana Nonsense Matipi!
Paunenge usina kuenzana panyama, unodonha. Izvo zvinoenda kune hupenyu. Kana hupenyu husina kuenzana, chimwe chinhu chinotora kuwira.
Zvichida hukama hwako hungatambura, uchapisa nepfungwa , iwe unozosara kumashure pabasa rako, kana iwe uchazongorasikirwa chero nekumwe kunakidzwa kwehupenyu pachahwo.
Ndicho chikonzero nei zvichikosha kuti uwane kugadzikana muhupenyu. Asi sei?
1. Iva Mune Izvozvi
Ndiko kuenzanisa. Nyika inoti ita zvese zviitwe iwe unoti 'Chinhu chimwe chete panguva.'
Ndiko kuzviratidza kwaunoita kuti uri pano. Zvino. Uye izvo une basa pano chaipo, izvozvi.
2. Nakidzwa neKunakidzwa
Zvinonzwika sezvisinganzwisisike. Mumwe angafunga kuti izvozvo zvinopihwa, asi isu takadzidziswa kubva pakuberekwa kufunga kwekunakidzwa sechinhu chinofanira kunakirwa 'imwe nguva.'
Chaizvoizvo, iyo tariro, uye tariro inowanzove iyo coral reef yeramangwana, yakanaka kwazvo, asi inoda nguva dzakakura kuti ikure zvinooneka.
Rukoko netaundi yeZvino inodiwa. Saka simuka nhasi shanyira chitoro chemabhuku uye ita hurukuro yakanaka nemusikana ari kuseri kwekaunda. Anoda kunyora nyaya pfupi.
Enda kumba, unogadzira masikati, tarisa magariro, batidza TV, uye cherekedza zvakaitika: wakada kuzvishingisa kuti ramangwana rakaringana kuita zvinhu. TV ikozvino yadzimwa. Kune gadheni rinoda kuitwa.
Nakidzwa nezvi diki, zvinonakidza zviito zvakabikwa muzuva rega rega. Vakoshese nechikonzero chimwe chete chiri nyore: vanofanirwa kukosheswa. Ivo ndevako.
Idzo nguva dzinokosheswa dzinokuudza kuti uri mupenyu izvozvi, ndizvo zvinhu zvinokuita iwe iwe , uye ivo vanopa rinoshanda rinorema kuyera nguva dzisinganakidze.
3. Kupa Kubva Nguva Nenguva
Pakupedzisira, munhu wese akataura nezvekurega. Meseji yacho inowanzo - uye nenzira kwayo - usarega. Zorora, asi dzokera kwairi.
Asi dzimwe nguva - nezvose zviri kuitika muhupenyu hwako zvakasanganiswa nezvose zvaunokwanisa kuzadzisa - zvakanaka kurega.
maitiro ekuita nekusuwa muwanano
Zvakanaka kurega zvimwe zvinhu zviende, kunyangwe vamwe vanhu, uye uwane mufaro wako kumwe kunhu. Hazvisi zvese zvinoda kuitwa.
Usazvipe iyo isina-kukunda mamiriro e 'Ini handidi XYZ, asi ini ndinodzoka kwazviri.'
Haisi iyo nzira yaunowana kuenzana muhupenyu.
Dzimwe nguva, izvo zvauri kuita muhupenyu - hungave hunyanzvi, basa, hukama kana zvimwe zvisungo - zvinokupedza, uye iwe unofanirwa kuzvitaurira kuti haina mvumo yekuita izvozvo.
Pamwe wakarota chimwe chinhu kwemakore matatu uye iwe zvino unonzwa mufaro mudiki kwazvo nezvacho zvekuti chinogumira paruvengo. Siyana nazvo. Kune zviroto zvakawanda mukati mako kupfuura zvauchazombosvika.
Ziva kuti hupenyu huchakuedza. Inowanzo kunzwa senge hapana-kuhwina mamiriro. Ko zvino, shamwari yangu?
4. Chinja Mamiriro Eiyi Bvunzo
Iti kwete iwe pachako kazhinji uye - heuno kicker - uve wakanaka neizvozvo.
Vimbiso kumunhu, basa, kana zano chinhu chakakosha chete kusvika padanho. Kana ikakweva kupfuura iyo inosimudza, mutoro.
Kana iwe wakanyanyorongedzerwa pakuendesa vana kwese kwavanofanirwa kuenda, mikana ndeyekuti kune mubereki ane yakawanda inowanikwa nguva yekufamba kupfuura iwe. Taura nevanhu uye iwe unozoshamiswa nekukurumidza vanozvipira vanokwira.
Iyo harried, isina-kukunda mamiriro ese ari pamusoro pekunzwa kusaenzana, asi izvo chete kana iwe uchizvimanikidza iwe kune rakamanikana bhuku remitemo.
dx vs hama dzekuparadza 2018
Nzira 11 Dzokupfuura Nezuva Raunoneta Kubasa
8 Yakanyanya Inoshanda Keystone Tsika Dzinozogadzira Yakanaka Shanduko MuHupenyu Hwako
Kuti Uchinje Hupenyu Hwako Kuti Uve Nani, Iwe Une 2 Sarudzo
8 Tsika Diki dzeVanhu Vanozeza Vanozorora
5. Ita 'em Kuseka
Uye na 'ivo' sanganisira iwe pachako. Hapana chinoyera pazuva, chimiro, kana chinguva senge kuseka chaiko. Hazvifanirwe kunge kuri kuita LOL kuseka kunyarara bemusement inoshanda futi.
Kana uchida ita kuti vanhu vaseke , iwe unofanirwa kubvuma kuti komedhi chiitiko chekutora chikamu. Vanhu vanozvida kana vari mukati mejoko newe.
Tsvaga zvinosetsa mukati mezuva rako uye iwe uri munzira yekuyera pasi.
Hunhu chikara chinoshamisa. Kunyangwe kuvapo chikara chinoshamisa. Saka uve wakanaka sezvaunoda kuve. Revel mune hunyanzvi hunosimudzira iyo yemazuva ese.
Mabasa anotisimudzira haawanzo kuita fomati ivo vanosimudza kuburikidza nezvinyorwa zvechokwadi zvavanazvo, uye iwe, zvinoshamisa nechikara iwe, unogona kubata chokwadi. Chaizvoizvo, iwe unoda chokwadi.
Chokwadi chinotimisikidza isu apo zvese zvimwe zvinoita senge zvine mhirizhonga.
Chokwadi chinotitaurira kuti zvisinei nezvinoitika muhupenyu… tinoramba tichienderera mberi. Hatisi kukanda mapfumo pasi. Hapana mumwe wedu anogona, anoda, kana kuita. Hazviite. Nekuti chero zvatiri, chero chinotiita, chisingaperi.
Chokwadi chaive pano pamberi pedu, chichava pano shure kwedu. Isu tiri nharaunda yetrillion zvidimbu zvinoumba tariro imwechete: icho Chokwadi chinoenderera.
Chii chiri varaidzo? Zvese. Ndiko kuvaraidzwa.
Kune chimwe chinhu kune wese munhu uye muviri wechinhu chose. Varaidzo ndezvese zvataurwa pamusoro, asi funga nezvazvo seine mucherechedzo wepamusoro, kwete yakaderera dhinomineta.
Kureba kwepfungwa kunokwidza varaidzo yako kubva kune yakachena nzvimbo ye 'kudya izvi' kuenda kune inotora chikamu 'edza izvi.'
Funga nezve nyika ine hushoma seyakaonga yekutenda. Hazvisi zvese zvinozofadza ese mabhure pane chero rurimi rweumwe munhu. Pachave ne tart cranberry muto padyo padyo nepatata mbatatisi.
Iyo yekudya kwese, zvakadaro, ichave yakaenzana. Sei? Nekuti iwe wakasanganisa zvinonhuwira zvako, ukasiyana manakiro, uye ukatobatirira idzo shangu bhutsu patsoka dzeTurkey.
Usati watanga basa iri rezvepfungwa, waive nechiratidzo chemhuri vagere kumashure vachikwiza matumbu avo nekunyemwerera kumeso kwavo.
Kuti wakavawana sei ikoko zvine basa. Wakazvivaraidza nezviratidzo. Chero chaunowana kuti chikufadze, ita shuwa kuti pane chimwe chinhu pazviri chinoita kuti iwe (uye nesu) tide kudzoka kuti tiwane zvimwe.
8. Chengetedza Nguva Yako Kuti Ubatsirwe
Kune zvese 'zvaunofanira kuita' kana 'unofanirwa kuve uripo,' zvisvetuke zvishoma 'kana uchida.'
Iyo-iwe-iwe unoda kuve chero chiitiko chinokukwevera iwe kubva mukufamba kwenguva uye mukugomera, kunyemwerera, kana kuchema kwemufaro.
Izvi hazvireve hazvo kuti nguva yebasa inofanirwa kuve yakaenzana neawa repayi. Maminitsi mashanu emufaro anogona kupokana nehafu yezuva remisangano, mafambiro, uye zvisungo.
Kugadzirisa nguva kubhenefiti yako zvinoreva kuve nechokwadi cheku 'rongedza' zvinhu zvinokuratidza kuti unokoshesa iwe!
Logan paul akatorwa akakwenya
9. Iva Nechokwadi
Hupenyu, kunyangwe warongeka sei uye wakadhirowewa sei, hausi imwe yeaya anogadzirisika, asina kutyaira mota. Hupenyu hunoda iwe semunhu anoshingairira kutora chikamu, asi kwete sekuwedzera-kuwedzerwa kuvhunduka zombie.
Kutyaira kwako, chiono chako, kuda kwako kubatanidza nyika mukutaurirana chinyararire: zvese izvi zvinokweretesa kune kubatanidzwa kwakabatana kweizvo iwe unofanira ita, izvo izvo iwe kuda ita, uye izvo izvo iwe simba ita.
Izvo chaizvo zviri chero munhu anogona kubvunza kwauri. Iwe unofunga kuzviita zvese, kana iwe unofunga kuita zvakakwana?
Funga nezvazvo nenzira iyi: Gehena rinofanirwa kuve nevashandi vemumugwagwa helluva kuti vagadzirise vese vakanaka zvinangwa uye wakakanganisa vanhu. Panguva yaunonyora 'Mugumo' pabasa rako rehupenyu, iwe, shamwari yangu, ndiwe mutariri waunopedzisira waudza.
maitiro ekuwanazve kutendwa mushure mekunyepera mukomana wako
ndiri kushungurudzika kuvabereki vangu
zvekuita kana iwe wakabhowekana kumba
akareba sei donald trump mwanakomana
ndiwe une mhosva yezviito zvako